Indraim-bava: ny fahorian’ny sasany, fifalian’ny hafa | NewsMada
Indraim-bava: ny fahorian’ny sasany, fifalian’ny hafa
Par Taratra sur 23/01/2020
Iainana sy tena atrehina ankehitriny ny fiantraikan’ny andro ratsy miteraka fahabetsahan’ny rotsak’orana ao anatin’izao fotoam-pahavaratra izao. Fiakaran’ny rano, miteraka tondradrano amin’ny faritra maro, fahatapahan-dalana, fihotsahan’ny tany,… Miteraka fahasahiranana eo amin’ny fiainana andavananadro ireo voalaza ireo, eo amin’ny asa aman-draharaha, ny fihariana. Mahatonga olana sosialy, toekarena.
Miaina izany izao, ohatra, ny mpianatra. Misy ny efa nampitsahatra ny fampianarana hatry ny afakomaly. Omaly, namoaka naoty ho an’ny tompon’andraikitry ny fampianarana any amin’ny isam-paritra ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena mba ho mailo ka handray fanapahan-kevitra hampiato ny fampianarana, arakaraka ny fahatsapana ny toe-java-misy. Ho tapaka indray izany ny fampianarana kanefa vao tsy ela akory ny efa voasembantsemban’ny fitokonana tamin’ilay resa-bola dimy arivo sy enina alina ariary iny. Mety mbola hitohy aza izany, raha tonga amin’ny hoe hametrahana traboina indray ny EPP na ny CEG…
Fa ity fahatapahan-dalana, indrindra ny lalam-pirenena amin’ny faritra maro ity, no ahina hiteraka olana goavana sosialy sy toekarena. Na ahoana na ahoana, tsy maintsy hiantraika amin’ny fitaterana izany, fivezivezen’ny olona sy ny entana, ny vokatra… Efa mikatso hatry ny omaly izao, ohatra, ny fitaterana olona amin’ny taksiborosy amin’ny lalam-pirenena fahefatra sy fahenina iny. Ho sarotra ny famatsiana ireo entana na vokatra tena ilaina amin’ny fiainana andavanandro. “Hikoha-maina aza atao”, hoy ny mpanararaotra. Mampionon-tena sisa azo atao fa tsy maintsy hiakatra indray izany ny vidin-javatra eny an-tsena rehetra eny.
Izao indrindra no ilana ny fandraisana andraikitry ny manampahefana amin’ny fanaraha-maso ny fampiakarana tsy amim-piheverana ny vidin’entana eny an-tsena. Toa ohatra ny misy koa izany fikambanana miaro ny zon’ny mpanjifa izany. Tokony hitsangana fa tsy hatoritory fa izao indrindra ny fotoana iandrasana azy. Mba tsy hifalian’ny sasany ny fahorian’ny hafa e!